Xubnaha Su'aalaha La Weydiiyo - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Jawaabaha Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Haddii aad ku cusub tahay CHPW ama aad muddo xubin ka ahayd, waxaa laga yaabaa inaad qabto su'aalo ku saabsan caymiskaaga iyo xubinnimadaada. U isticmaal boggan ilaha macluumaadka si aad u hesho jawaabaha su'aalaha caadiga ah.
Ma heli doonaa kaar aqoonsi?
Haa. Markaad iska qorto qorshaha Faa'iidada Medicare ee CHPW, waxaad ku heli doontaa kaarkaaga aqoonsiga boostada 30 maalmood gudahood.
Waxa kale oo aad soo dejisan kartaa ama daabacan kartaa kaarkaaga Aqoonsiga wakhti kasta adiga oo galaya xisaabta myCHPW.
Waxaad u baahan doontaa inaad tusto kaarkaaga aqoonsiga mar kasta oo aad hesho daryeel caafimaad. Taas waxaa ka mid ah booqashooyinka caafimaadka, booqashooyinka takhasuska leh, booqashooyinka caafimaadka maskaxda, booqashooyinka isbitaalka, iyo dawooyinka farmashiyaha.
Haddii aad u baahan tahay kaar aqoonsi oo cusub oo laguu soo diray, fadlan wac Adeegga Macaamiisha ee 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 am ilaa 8:00 pm, 7 maalmood usbuucii.
Haddii aadan caafimaad qabin oo aadan hubin nooca daryeelka aad u baahan tahay, la hadal khabiir kaa caawin kara inaad go'aansato haddii aad raadinayso daryeel degdeg ah ama aad sugto inuu ku arko bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah.
Xubnaha CHPW waxay la xiriiri karaan Khadka Kalkaalisadayada Kalkaaliyaha 24 saac maalintii, 7 maalmood usbuucii: 1-866-418-2920 (TTY: 711).
Ka waran haddii aan qabo xaalad degdeg ah oo caafimaad?
Qorshaha Faa'idada Medicare -ka CHPW, mar walba waxaa lagugu daboolaa xaaladaha degdegga ah meel kasta oo adduunka ah. Haddii aad xanuunsato ama dhaawacdo, ama aad leedahay xaalad caafimaad oo degdeg ah: wac 9-1-1 ama u tag qolka gurmadka degdegga ah ee isbitaalka kuugu dhow ama xarunta daryeelka degdegga ah si laguu caawiyo.
Waan guuray, sidee baan cinwaankayga u beddelaa?
Markaad guurto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad beddesho bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah (PCP). Wakiiladeena Adeegga Macmiilka ayaa kaa caawin kara doorashada PCP -ga cusub waxayna kugu wargelin doonaan tallaabooyin kasta oo kale oo ay tahay inaad qaaddo. Wac Adeegga Macmiilka aat 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 am ilaa 8:00 pm, 7 maalmood usbuucii.
Miyaan ku bixin karaa qorshahayga faa'iidada Medicare siyaasaddayda Medigap?
Nidaamkaaga Medigap looma adeegsan karo in lagu bixiyo kharashka Medicare Advantage Plan, lacagaha lagaa jaro, iyo lacagta caymiska. Nidaamka Medigap waa hab aad adigu ku bixin kartid kharashyadaada Medicare ee Asalka ah. Qorshaha Faa'iidada ayaa ah qaab kale oo lagu helo dheefahaaga Medicare, taas oo ku siinaysa caymis dheeri ah.
Halkeen ka heli karaa macluumaad ku saabsan isbeddelada qaaciddada ee dhaca inta lagu gudajiro sanad-dugsiyeedka?
Si aad u hesho macluumaad cusub oo ku saabsan daawooyinka uu daboolayo Faa'iidada Medicare ee CHPW, fadlan booqo bartayada bogga foomka, ama ka wac Adeegga Macmiilka at 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 am ilaa 8:00 pm, 7 maalmood usbuucii.
Online: gal gal Xarunta Xubinta si aad dhakhtarkaaga ugu beddesho koontadaada
Na soo wac: 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 am ilaa 8:00 pm, 7 maalmood usbuucii.
Nagu soo dir: [emailka waa la ilaaliyay]
Sideen ku soo gudbiyaa dalab daawo ama daawo caymis caafimaad?
Bixiyeyaasha badankood si toos ah ayey biilalka noogu soo gudbin doonaan. Mararka qaarkood markaad hesho daryeel caafimaad ama dawo dhakhtar qoray, waxaad toos u bixin kartaa lacagta. Waqtiyada kale, waxaad ogaan kartaa inaad kubixisay wax kabadan intaad filaysay xeerarka caymiska ee qorshahaaga. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaad weydiin kartaa qorshahaaga inuu dib kuu soo celiyo.
Si dib looguugu soo celiyo adeegyada la daboolay ama daawooyinka, fadlan ku soo dir codsigaaga oo ay la socdaan biilkaaga iyo dukumintiga lacag -bixinta aad samaysay:
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Faa'iidada Medicare ee Washington - Sheegashooyin
Waa maxay Medicare Qaybta D?
Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee dawladda dhexe ee loogu talagalay dadka jira 65 sano ama ka weyn, dadka qaar ka yar 65 jir oo leh naafo gaar ah, iyo dadka qaba cudurka kalyaha dhammaadka ah (kelyaha oo aan shaqayn).
Medicare Qaybta D waa caymiska kharashyada dawooyinka ee laguu qoro. Halkii aad ka bixin lahayd dawooyin badan, waxaad bixin doontaa lacag -bixin (qaddar doolar oo go'an) ama caymis (boqolkiiba go'an) oo ah kharashka dawada.
Sideen ku ogaan karaa in dawadaydu daboolan tahay?
Sannad kasta, waxaan daabici doonaa a qaaciddada, oo sidoo kale loo yaqaan "Liiska Daawooyinka Daboolan" ama "Liiska Daawada." Dib u eeg liiskan si aad u go'aamiso heerka dawadaadu ku jirto iyo haddii ay jiraan wax xayiraad ah oo saaran.
Maxay daroogooyinka qaarkood u leeyihiin xaddidaad?
Daawooyinka dhakhtarku qoro qaarkood, sharciyada gaarka ah ayaa xaddidaya sida iyo goorta qorshuhu daboolayo. Koox dhakhaatiir iyo farmashiistayaal ah ayaa soo saaray sharciyadan si ay uga caawiyaan xubnaheenna inay u isticmaalaan daroogada siyaabaha ugu wax ku oolka ah. Sharciyadan qaaska ah waxay sidoo kale gacan ka geysanayaan xakameynta qarashyada guud ee daawada, taasoo ka dhigeysa caymiskaaga daawada mid la awoodi karo.
Guud ahaan, sharciyadayadu waxay kugu dhiiri galinayaan inaad hesho dawo u shaqeysa xaaladaada caafimaad oo amaan ah oo wax ku ool ah. Mar kasta oo daroogo, qiimo jaban u shaqeyn doono si la mid caafimaad ahaan sida daroogada qaaliga ah, xeerarka qorshaha waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo adiga iyo adeeg bixiyahaaga inaad isticmaasho xulashada qiimaha jaban. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan u hogaansano xeerarka iyo qawaaniinta Medicare ee ku saabsan caymiska dawooyinka iyo wadaagista kharashka.
Waa maxay noocyada xaddidaadaha lagu soo rogay daroogada?
Qorshaheenu wuxuu adeegsadaa noocyo kala duwan oo xadeyn ah si looga caawiyo xubnaheenna inay u isticmaalaan daroogada siyaabaha ugu wax ku oolka ah. Qaybaha hoose waxay waxbadan kaaga sheegayaan noocyada xaddidaadaha aan u isticmaalno daroogooyinka qaarkood. Noocyada xayiraadaha waxaa ka mid ah:
Oggolaanshaha Hore (PA): Daawooyinka qaarkood, adiga ama adeeg bixiyahaagu waxaad u baahan tihiin inaad oggolaansho ka heshaan qorshaha ka hor intaanan oggolaan inaan idiin daboolo daawada. Tan waxaa lagu magacaabaa "oggolaansho hore." Mararka qaarkood shuruudda oggolaanshaha hore ayaa gacan ka geysanaysa hagidda isticmaalka habboon ee daawooyinka qaarkood. Haddii aadan helin oggolaanshahan, waxaa laga yaabaa in daawadaadu aysan daboolin qorshaha.
Daaweynta Tallaabada (ST): Shuruudaani waxay kugu dhiiri galinaysaa inaad tijaabiso wax ka qiimo jaban laakiin sida daroogada wax ku oolka ah kahor qorshuhu daboolayo daroogo kale. Tusaale ahaan, haddii daroogada A iyo daroogada B ay daweeyaan isla xaalad caafimaad isla markaana daroogada A ay ka qiimo jaban tahay, qorshuhu wuxuu kaa doonayaa inaad marka hore tijaabiso daroogada A. Haddii daroogada A aysan kuu shaqeynaynin, qorshuhu wuxuu markaa dabooli doonaa daroogada B.
Xaddiga Tirada (QL): Daawooyinka qaarkood, waxaan xadideynaa xaddiga daawada ee aad yeelan karto annaga oo xaddideyna inta daawada ah ee aad heli karto mar kasta oo aad buuxiso dawadaada. Tusaale ahaan, haddii sida caadiga ah loo arko inay badbaado tahay in hal kiniin oo keli ah la qaato dawo gaar ah, waxaan ku xadidi karnaa caymiska dawadaada mid aan ka badnayn hal kaniini maalintii.
B iyo D Go'aaminta (BVD): Kani waa go'aan caymis si loo arko qaybta Medicare ee dabooli doonta daawadaada. Waxaa jira shuruudo cayiman oo ay tahay in daawooyinka qaarkood ay buuxiyaan si loogu daboolo Qeybta D. (Tusaale ahaan, kiimoteraabiga iyo daawooyinka loo qoro si loola dhaqmo lallabbo iyo matag waxay ku xiran yihiin go'aaminta B vs D).
Waa maxay dawooyinka laga reebay caymiska Qaybta D?
Marka daroogada laga reebo caymiska, tani waxay ka dhigan tahay in Medicare aysan bixinaynin daawada. Waxaa jira seddex sharci oo guud oo ku saabsan daawooyinka aysan qorshayaasha daweynta Medicare aysan hoos imaan doonin Qeybta D: Qeybta D caymiska daawada ma dabooli karo daawo lagu daboolayo Qeybta A ama Qeybta B; ma dabooli karno dawo laga soo iibsaday meel ka baxsan Mareykanka iyo dhulalkiisa; badiyaa ma dabooli karno adeegsiga calaamadda ka baxsan. “Isticmaalka calaamadda ka baxsan calaamadaha” waxaa lagu qeexay isticmaalka daroogada oo aan ka aheyn kuwa lagu tilmaamay calaamadda daroogada sida ay u ansixiyeen Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka.
Intaa waxaa sii dheer, sharci ahaan, Medicare Qaybta D ma dabooli karto qaybaha daroogada ee soo socda:
Ka-iibsiga Miisaanka Badan, ama daawooyinka aan dhakhtar qorin
Daawooyinka loo isticmaalo in lagu dhiirrigeliyo bacriminta
Daawooyinka loo isticmaalo qufaca iyo calaamadaha hargabka
Daawooyinka loo isticmaalo ujeedooyinka qurxinta ama kor u qaadida koritaanka timaha
Faytamiinnada la qoro iyo waxyaabaha macdanta laga helo, marka laga reebo fiitamiinnada dhalmada ka hor iyo u diyaargarowga foloraydhka
Daawooyinka marka loo isticmaalo daaweynta galmada ama kacsiga
Daawooyinka marka loo isticmaalo daaweynta anorexia, miisaanka oo yaraada, ama miisaanka oo kordha
Daawooyinka bukaan-socodka ee soo-saaruhu doonayo inuu u baahdo in baaritaannada la xiriira ama adeegyada kormeerka laga iibsado gaar ahaan soo-saaraha xaalad iib ah
Dhakhtarkaygu wuxuu gudbiyay codsi ogolaansho hore. Mudo intee le'eg ayey qaadan doontaa tan?
Caadi ahaan, codsi caadi ah waa inuu go'aan ku gaadhaa 72 saacadood gudahood (oo ay ku jiraan dhammaadka usbuuca iyo ciidaha), illaa aan uga baahanno macluumaad dheeraad ah bixiyahaaga. Waxaa lagugu ogeysiin doonaa taleefan iyo boosto markii go'aanka la gaaro. Xaaladaha qaarkood, bixiyahaaga ayaa laga yaabaa inuu go'aamiyo in caymiska daawada qaarkood si deg deg ah loo go'aansado. Xaaladahaas oo kale, go'aan ayaa lagu gaari doonaa 24 saacadood gudahood (oo ay ku jiraan dhammaadka usbuuca iyo ciidaha).
Ma haysaa su'aalo dheeraad ah? Waxaan halkaan kuugu joognaa
Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah dokumentigaaga Caddaynta Daboolista (EOC) ee qorshahaaga. Waxaad sidoo kale ku gaari kartaa kooxdayada Adeegga Macmiilka ee 1-800-942-0247 (TTY: 711), 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 fiidnimo, 7 maalmood toddobaadkii, si aad su'aalo u weydiisato, u codsato nuqulada daabacaadda ee alaabta, iyo waxyaabo kaloo badan.